बिरामीलाई मर्कामा पारेर बेनी अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा « News24 : Premium News Channel
बिरामीलाई मर्कामा पारेर बेनी अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा
म्याग्दी । तलब भत्ताको माग गर्दै म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । तीन महिना देखि आफूहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा नपाएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक ,स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलनका कारण अस्पतालमा इमरजेन्सी शाखा बाहेकका सबै बन्द भएका छन् । सेवा अवरुद्ध हुँदा अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । ६४ शैय्या बराबरको सुविधा दिइरहेको अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भएको छ ।
औषधी उपचार र प्रशासनिक काम ठप्प पारेर चिकित्सक ,स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु आकस्मिक कक्ष अगाडी धर्ना बसेका छन् । बहिरंग, ल्याब, आँखा उपचार लगायत औषधीसम्बन्धी सेवाका साथै प्रशासनिक काम पनि ठप्प पारेका छन् ।
तीन महिना देखीको तलब भत्ता पठाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेपछि इमरजेन्सी बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको डाक्टर गोबिन्द पोखरेलले बताए। आफूहरुले असार महिना देखी तलब, काम गरेको बापत प्रोत्साहन भत्ता लगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतला प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो पोखे।
चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा पनि तीन महिनादेखी रोकिएको तलब भत्ता नपाएपछि आफूहरुले सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको डा. दिपेश पण्डितले बताए । तलब भत्ता नपाउँदा पारिवारिक समस्या समेत बढेको उनले दुखेसो पोखे। अस्पतालमा कार्यरत १२४ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलगायत आन्दोलित भएका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत स्थायी र करारमा कार्यरत करिब १२४जना कसैले पनि तलब नपाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. जितन्द्र कँडेलले बताए। केही समय अघिदेखी तलब नपाउने भएपछि पेन डाउन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्माचारीले दवाब दिएपछि पाँच पटक सम्म सम्झाएर काममा फर्काएको उनले बताए।
अस्पताल व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको बैठक पछि लेखापालले तलब भत्ता उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपनि आनाकानी गरिरहेको उहाँको भनाई छ । समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी गराएको उनले बताए।
यता, अस्पतालमा सेवा अवरुद्ध हुँदा उपचार गर्न आएका विरामीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिका –२ बाट आफन्तको आँखाको उपचार गर्न आएपनि आन्दोलनले गर्दा आफुहरुले उपचार नपाएको बताए । मुटु रोगपीडित बेनी नगरपालिका–५, भिरमुनीका भक्तबहादुर बानियाँ आन्दोलनको मारमा परेका छन् ।
बन्द भएको सेवा खुल्ने आशमा विहान ११ बजेदेखी कुरेर बसेका छन् । यस्तै, बेनी नगरपालिका–२ बाट आएका ज्वरो विरामी अर्जुन किसान अन्दोलनको मारमा परेका छन् ।
अर्जुन किसानजस्तै रघुगंगा गाउँपालिका–३ बाट अस्पतालमा आँखा जचाउन आएपनि आन्दोलनका कारण उपचार नपाएको डम्मरबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘आँखा दुखेको चार–पाँच दिन भयो, घरेलु उपचारले निको नभएपछि बेनी अस्पताल आएको थिएँ । के कारणले सेवा पाउन सकिरहेको छैन ।यहाँ उपचार नहुनेभएपछि बाहिरी प्राइभेटमा भएपनि जानुपर्यो ।’
मन्त्रालय परिवर्तन हुँदा केही प्राविधिक समस्या हुँदा लेखासम्बन्धी केही ढिला भएको हुन सक्ने अस्पतला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए । अस्पतालमा लेखापालको दरबन्दी नभएकोले प्रदेश सरकारले तीन वटा कार्यालय हेर्नेगरी एक जना लेखापाल नारायण सुवेदीलाई पठाएको पठाएको छ ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको बेनी अस्पताल अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छ ।